Yurub oo soo bandhigaysa qorshihii soogalootiga ee muranka dhaliyay - iftineducation.com
iftineducation.com – Gelinka dambe ee maanta guddiga middowga yurub ayaa shaacin doona faahfaahinta qorasha muranka dhaliyey ee dib u dejinta loogu samaynayo tobanaan kun oo muhaajiriin ah, kuwaas oo gaaray koonfurta Yurub.
Waxay ka soo jeedaan Qaarada Afrika iyo Bariga dhexe.
Waxa lagu soo waramayaa in 40 kun oo muhaajiriintan ah loo kala qeybin doona wadamada Yurub iydoo la adeegsan doono qiyaas la jaan gooyey oo wadankiiba loo qoondeeyey.
Soogalootiga dib u dejinta loo sameyn doono waxa ka mid ah kuwa ku sugan dalalka Greega iyo Talyaaniga si waddamadan looga yareeyo culayska saaran.
Waxa sidoo kale qorshahani barbar socda dib u dejinta 20 kun oo qof oo wadamada yurub iskood u ogolaadeen in ay dib u dejin u sameeyaan, dadkaas ayaa haatan waxay ku nool yihiin Dibeda Yurub.
Xukuumada Britain ayaa sheegaysa in ay adeegsan doonto xaqa ay u leedahay in ay isaga baxdo qorshahan.
Xoghayaha arrimaha horumarka caalamiga ah ee Britain ayaa sheegay in tallaabadan ay ku diirigelin karto soo galootiga in ay naftooda qatar geliyaan oo adeegsadaan doomaha aan wanaagsanayn ee ay doonayaan in ay ku soo gaaran Yurub. Farasiiska iyo Spain ayaa sidoo kale dhaleeceeyey qorshahan.
Daawo video Policeka Dalka Canada oo si Arxan daro ah u garaacaya wiilal Burcad soomaali ah